Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment नेपाली सेनाले गर्ने भयो सगरमाथासहित ६ हिमालको सफाइ, खर्च कति लाग्ला ? - Pnpkhabar.com
नेपाली सेनाले गर्ने भयो सगरमाथासहित ६ हिमालको सफाइ, खर्च कति लाग्ला ?
काठमाडौं, ६ फागुन : नेपाली सेनाले ६ वटा हिमालको सफाइ गर्ने भएको छ । दुई वर्षअघि सगरमाथाको सफाइ गरेको नेपाली सेनाले यस पटक ६ वटा हिमाल सफाइ गर्न लागेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी हिमांशु खड्काले जानकारी दिए ।
यसपटक सगरमाथा, ल्होत्से,पुमोरी, आमादब्लम, मकालु र धौलागिरि हिमालको सफाइ हुने छ । बेस क्याम्प र त्यसभन्दा माथिको क्षेत्रमा सफाइ गरेर ३५ टन फोहर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको सहायक रथी खड्काको भनाइ छ । १८ टन फोहर बेस क्याम्पभन्दा माथिबाटै सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको सेनाले जनाएको छ ।
२०७७ सालको चैत ३१ गते आरोहण टोलीलाई ब्यानर हस्तान्तरण गरेर अभियानको सुरु हुने र २०७८ सालको जेठ २२ गते विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा समापन हुनेछ । सेनाले नसड्ने फोहर हेलिकप्टर र गाडीमार्फत काठमाण्डौ ल्याएर फेरि प्रयोग गर्ने संस्थालाई हस्तान्तरण गर्ने पनि सेनाले जनाएको छ ।
अभियानमा नेपाली सेनाका ४३ जना आरोही सदस्य र शेर्पालगायतका अन्य व्यक्तिको पनि सहयोग रहनेछ । हिमाल सफाइका लागि सेनाले मुस्ताङको जोमसोममा विशेष तालिम हुने जनाएको छ । हिमाल सफाइका लागि १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान रहेको सहायक रथी खड्काले बताए ।
यसमध्ये नेपाली सेनाको साढे दुई करोड र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । हिमालमा बारम्बार सफाइ अभियान गर्नुभन्दा फोहर नै हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिनका लागि पनि विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा काम हुनुपर्ने सेनाले जनाएको छ ।
सन् २०१९ मा सगरमाथा सफाइ अभियान सुरु भएको थियो । गएको वर्ष कोरोना महामारीका कारण हिमाल सफाइको काम प्रभावित भए पनि यो वर्ष फेरि निरन्तरता दिन लागिएको सेनाले जनाएको छ ।